Islaamka Faransiiska - Paris - Marseille - Lyon - Montpellier
Xaaladda Covid-19 ee France
Islaamka ee Faransiiska
Islam waa diinta labaad ee sida weyn loo sheegto ee France (gadaal kaliya Masiixiyadda). France waxay leedahay tirada ugu badan ee muslimiinta ku nool dunida reer galbeedka, ugu horrayn waxaa sabab u ah ka haajiridda Maghrebi, Galbeedka Afrika, iyo waddamada Bariga Dhexe. Shirkadda codbixinta ee IFOP ee Faransiiska ayaa ku qiyaastay 2016 in Muslimiinta Faransiiska ay u dhexeeyaan 3 illaa 4 milyan, waxayna sheegtay in Muslimiinta ay yihiin 5.6% dadka Faransiiska ah ee ka weyn 15, iyo 10% kuwa ka yar 25.] Sida laga soo xigtay ra'yiururintii ugu dambeysay ee Eurobarometer (2019), dhinaca kale, dadka Muslimiinta ah ee ku nool France waa 5% wadarta guud ee dadweynaha.
Inta badan Muslimiinta ku jirta France ka tirsan mad-habta Sunniga. Inta badan muslimiinta faransiiska waxay asal ahaan ka soo jeedaan soo galootiga, halka dad lagu qiyaaso 100,000 ay yihiin kuwa qaatay diinta islaamka asal ahaanna ka soo jeeda asal ahaan Faransiiska. Gobolka Mayotte ee ka baxsan Faransiiska waxaa ku nool aqlabiyad muslimiin ah.
Sida lagu sheegay daraasad ay ka qaybgaleen 536 qof oo asalkoodu muslim yahay, 39% ka mid ah Muslimiinta ayaa ka qayb qaatay France oo ay su'aalo weydiinayeen kooxda codbixinta ee IFOP ayaa sheegay in ay ilaalinayeen shanta salaadood ee Islaamka maalin kasta sanadkii 2008, kor u kaca joogtada ah ee 31% ee 1994, sida lagu sheegay daraasadda lagu daabacay joornaalka Katooliga Iskutallaabta. Ka qeybgalka Masjidka ee Salaada Jimcaha ayaa sare u kacay 23% sanadkii 2008, halka 16% uu ahaa 1994, halka xuska Ramadaan uu gaaray 70% sanadkii 2008 halka 60% 1994 la sheegay. Cabitaanka khamriga, oo Islaamku reebay, ayaa sidoo kale hoos uga dhacay 34% halka uu ka ahaa 39%.
Socdaalka Muslimiinta, oo u badan rag, wuxuu sarreeyay dabayaaqadii 1960s iyo 1970s. Soogalootigu waxay ka yimaadeen asal ahaan Algeria iyo mustacmaradii kale ee Waqooyiga Afrika; hase yeeshee, Islaamku taariikh facweyn ayuu ku leeyahay France, ilaa Masjidka Weyn ee Paris waxaa la dhisay 1922, iyadoo calaamad u ah aqoonsiga Jamhuuriyadda Faransiiska ee muslinka dhacay tirailleurs inta badan waxay ka yimaadaan Algeria, gaar ahaan dagaalkii Verdun iyo la wareegidii qalcadda Douaumont.
Golaha Faransiiska ee Iimaanka Muslimiinta
In kasta oo Dawladda Faransiisku tahay mid cilmaaniya, haddana sannadihii la soo dhaafay dawladdu waxay isku dayday inay abaabusho wakiil ka socda Muslimiinta Faransiiska. Sannadkii 2002, wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas Nicolas Sarkozy wuxuu bilaabay abuuritaanka "Golaha Faransiiska ee Iimaanka Muslimiinta" (Conseil Français du Culte Muslim - CFCM), in kasta oo dhaleeceyn ballaaran ay sheegatay inay taasi dhiirrigelinayso oo keliya wadaagnimada. In kasta oo CFCM ay si rasmi ah u aqoonsan tahay dawladda qaran, waa urur gaar loo leeyahay oo aan macaash doon ahayn oo aan lahayn sharci gaar ah. Laga soo bilaabo 2004, waxaa madax ka ah Raktarka Paris Masjidka, Dalil Boubakeur - oo si kulul u dhaleeceeyay muranka ka taagan Midawga Ururada Islaamka France (UOIF) si ay ugu lug yeelato arimaha siyaasada xiligii rabshadihii 2005. Aragtida Nicolas Sarkozy ee secularism waxaa si weyn u dhaleeceeyay xubnaha bidixda iyo garabka midig ee baarlamaanka; si gaar ah, waxaa lagu eedeeyay, intii lagu jiray abuuritaanka CFCM, inuu u xaglinayo qeybaha aadka u daran ee matalaadda Muslimiinta ee Golaha, gaar ahaan UOIF.
Soogalootiga jiilka labaad
Jiilkii ugu horreeyay ee soo galootiga muslimiinta ah, oo maanta inta badan ka fariistay shaqaalihii, waxay xiriir adag la leeyihiin dalalkooda, halkaasoo ay ku noolaayeen qoysaskooda. Sannadkii 1976-kii, dowladda ayaa soo saartay sharci u oggolaanaya qoysaska muhaajiriintaas inay degi karaan; sidaas darteed, carruur iyo xaasas badan ayaa u guuray France. Muhaajiriinta badankood, markay ogaadeen inaysan kari karin ama aysan rabin inay ku laabtaan dalkooda, waxay codsadeen dhalashada Faransiiska ka hor inta aysan si aamusnaan ah uga fariisan. Si kastaba ha noqotee, in badan ayaa keli ku nool mashaariicda guryaha, iyagoo hadda lumiyay xiriirkii ay la lahaayeen dalalkii ay ka yimaadeen.
Olivier Roy wuxuu tilmaamayaa in jiilka koowaad ee soo galootiga, xaqiiqda ah inay yihiin Muslimiin ay tahay kaliya hal cunsur oo ka mid ah kuwa kale. Aqoonsiga ay ka helayaan waddankooda asalka ah ayaa aad uga xoog badan: waxay marka hore is arkaan iyaga oo ka soo farcamay (Algeria, Moroccans, Tunisians, iwm).
Sheegashada beenta ah waxaa lagu soo qaaday hadalka socdaalka Mareykanka oo seddex meelood meel carruurta dhasha ay ku jiraan France yeelo waalid waalid muslim ah.
Sida laga soo xigtay Michel Tribalat, oo ah cilmi baare ka tirsan INED, dadka ka soo jeeda Maghrebi waxay ka soo jeedaan France waxay matalaan 82% dadka Muslimiinta ah (43.2% waxay ka yimaadeen Algeria, 27.5% waxay ka yimaadeen Morocco iyo 11.4% laga soo qaatay Tunisia). Kuwa kale waxay ka yimaadeen Sub-Sahara Africa (9.3%) iyo Turkey (8.6%). Waxay ku qiyaastay inay jiraan 3.5 milyan oo qof oo asal ahaan ka soo jeeda Maghrebi (oo ugu yaraan hal ayeeyo ay ka timaado Algeria, Morocco or Tunisia) ku nool France sanadkii 2005 una dhiganta 5.8% wadarta guud ee dadka reer faransiiska ah (60.7 milyan sanadkii 2005). Maghrebis waxay inta badan degeen gobollada warshadaha France, gaar ahaan Paris gobolka. Dad badan oo caan ah oo Faransiis ah sida Edith Piaf, Isabelle Adjani, Arnaud Montebourg, Alain Bashung, Dany Boon iyo kuwa kale oo badan ayaa leh darajooyin kaladuwan oo ku abtirsada Maghrebi.
Hoos waxaa ku yaal shaxda tirada dadka asal ahaan ka soo jeeda Maghrebi France, tirooyinku waa kumanaan:
Country 1999 2005 % 1999/2005 % Dadka faransiiska ah (60.7 milyan sanadkii 2005)
Algeria 1,577 1,865 + 18.3% 3.1%
Haajiriinta 574 679
Wuxuu ku dhashay Faransiiska 1,003 1,186
Morocco 1,005 1,201 + 19.5% 2.0%
Haajiriinta 523 625
Wuxuu ku dhashay Faransiiska 482 576
Tunisia 417 458 + 9.8% 0.8%
Haajiriinta 202 222
Wuxuu ku dhashay Faransiiska 215 236
Wadarta Maghreb 2,999 3,524 + 17.5% 5.8%
Haajiriinta 1 299 1 526 2.5%
Wuxuu ku dhashay Faransiiska 1 700 1 998 3.3%
Sannadkii 2005, boqolkiiba dadka da'doodu ka yar tahay 18 jir ee ka soo jeeda Maghrebi (ugu yaraan hal waalid soogalooti ah) waxay ku dhowaad 7% ku noolaayeen Metropolitan France, 12% ka Weyn Paris iyo in ka badan 20% qaybta Faransiiska ee Seine-Saint-Denis.
% sanadkii 2005
Wadarta Maghreb 22.0% 13.2% 13.0% 13.0% 12.1% 6.9%
Sanadkii 2008, machadka qaranka ee tirakoobka ee INSEE, wuxuu ku qiyaasey in 11.8 milyan oo muhaajiriin ajaanib ah iyo dhalashooda tooska ah (ku dhashay France) ku noolaa France oo matalaya 19% dadka dalka. Qiyaastii 4 milyan oo iyaga ka mid ah ayaa asal ahaan ka soo jeeda Maghrebi.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ilaha aan cilmiga ahayn ee u dhexeeya 5 ilaa 6 milyan oo qof oo asal ahaan ka soo jeeda Maghrebin ayaa ku nool France oo u dhiganta qiyaastii 7-9% wadarta guud ee dadka reer Faransiiska ah.
Ku dhaqanka diinta
Inta badan dadka muslimiinta ah waxay ku dhaqmaan diintooda qaab dhismeedka Faransiiska ee laitcité iyadoo xeerka anshaxa diinta uusan ku xadgudbi karin aagga dadweynaha. Daraasada ayaa lagu sheegay 39% inay tukadaan (salaad) shan jeer, badankoodana ay soomaan soonka Ramadaan (70%) badankooduna ma cunaan hilibka doofaarka halka qaar badanna aysan cabi khamri. Rachel Brown waxay muujineysaa in muslimiinta qaar ay ku jiraan France baddal qaar ka mid ah dhaqamadan diiniga ah, gaar ahaan ku dhaqanka cuntada, oo ah qaab lagu muujiyo "isdhexgalka" dhaqanka Faransiiska. Sida laga soo xigtay khabiir Franck Fregosi: "In kasta oo soonka bisha Ramadaan ay tahay dhaqanka ugu caansan, haddana wuxuu ka sarreeyaa calaamadda aqoonsiga muslinka marka loo eego cibaadada, waxayna astaan ​​u tahay ka mid noqoshada dhaqan iyo bulsho", wuxuuna intaas ku daray inaysan ahayn cabitaanka khamriga "waxay umuuqataa inay tahay dhaqan dhaqan badan".
Qaar ka mid ah Muslimiinta (UOIF tusaale ahaan) waxay codsadaan in la aqoonsado beel islaami ah oo ku jirta France (taas oo weli dhiman) oo leh xaalad rasmi ah.
Laba urur oo waaweyn ayaa aqoonsan Golaha Faransiiska ee Iimaanka Muslimiinta (CFCM): "Xiriirka Muslimiinta Faransiiska" (Fédération des musulmans de France) oo ay weheliyaan inta badan hoggaamiyeyaasha Marooko, iyo muranka ka taagan "Midowga Ururada Islaamka France"(Union des ururada islamiques de France) (UOIF). Sanadkii 2008, waxaa jiray ku dhowaad 2,125 goobo muslimiin ah oo cibaado ah France.
Tan iyo markii si guud loo maalgeliyey iskuulada Gobolka ee France waa inuu ahaadaa mid cilmaaniya, sababtuna tahay kala taggii 1905 ee Kaniisadda iyo Gobolka, waalidiinta muslimiinta ah ee raba inay carruurtooda wax ku bartaan dugsi diimeed inta badan waxay doortaan iskuulo kaatoolig ah oo gaar loo leeyahay (sidaas darteedna lacag bixinta, inkasta oo si xoog leh loo kabo), kuwaas oo ay badan yihiin. Iskuulo gaar ah oo Muslimiin ah ayaa la abuuray. Waxaa jira iskuul muslimiin ah oo ku yaal La Réunion (jasiirad Faransiis ah oo ku taal bariga Madagascar), iyo Muslimkii ugu horreeyay college (iskuulka ardayda da'doodu tahay kow iyo toban ilaa shan iyo toban) ayaa albaabada loo furay 2001 dii Aubervilliers (xaafad waqooyi bari ka xigta Paris), oo ay la socdaan kow iyo toban arday. Si ka duwan iskuulada gaarka loo leeyahay badankood United States iyo Boqortooyada Midowday (UK), dugsiyadan diimeed waa kuwo la awoodi karo waalidiinta badankood maadaama laga yaabo inay si weyn u kabto dawlada (mushaharka macalimiinta gaar ahaan waxaa daboolaya Gobolka).
Bishii Oktoobar 2020, shaqo la'aanta ka jirta muslimiinta ayaa aad uga sarreysay 14% marka loo eego dadka ku nool guud ahaan (8%).
Sanadkii 2010, daraasad cinwaankeedu ahaa Muslimiinta faransiiska miyaa lagu takooray dalkooda? waxay ogaatay in "Muslimiinta diraya dib u soo celinta rajada wareysiga shaqada ay ka fursad yar tahay 2.5 jeer Masiixiyiinta" oo leh aqoonsi isku mid ah "jawaab togan oo ku saabsan codsiyadooda".
Tusaalooyinka kale ee faquuqa lagu hayo dadka muslimiinta ah waxaa ka mid ah xaalufinta 148 xabaal oo muslimiin Faransiis ah oo ku dhow Arras Doofaar madaxiisii ​​ayaa laga soo lalmiyay dhagxaanta madaxa iyo ereyo cay ah oo diinta islaamka lagu aflagaadeynayo oo muslimiinta waxaa lagu xardhay qabuuraha qaar. Burburinta iyo kharribaadda qabuuraha muslimiinta ee France waxaa loo arkay inay yihiin Islaam naceyb warbixinta ay soo saartay Xarunta Dabagalka Yurub ee Cunsuriyada iyo ajnabi naceybka. Tiro masaajiddo ah ayaa sidoo kale la burburiyey France sanadihii la soo dhaafay. 14kii Janaayo 2015 waxaa la soo sheegey in 26 masaajid oo ku yaal France ayaa la weerarayay tan iyo markii uu qarxay Charlie Hebdo Paris.
On 29 June 2017, nin uu ku dhacay cudurka 'schizophrenia' wuxuu isku dayay inuu baabuurkiisa ku jiido dad badan oo cibaadeysanayay oo ka baxayay masjid ku yaal Créteil, xaafad ka mid ah Paris, in kastoo aysan cidna wax ku noqon. Le Parisien wuxuu sheeganayaa tuhmanaha, asal ahaan ka soo jeeda Armenia, inuu doonayay inuu "ka aargoosto weeraradii Bataclan iyo Champs-Elysées".
Sannadkii 2019, Machadka Faransiiska ee Cilmi-baarista Dadweynaha (IFOP) wuxuu daraasaddan sameeyay intii u dhaxeysay 29-kii Ogosto illaa 18-kii Sebtember, iyadoo lagu saleeyay muunad 1007 Muslimiin ah oo ay da’doodu u dhexeyso 15 iyo wixii ka sarreeya. Sida lagu sheegay daraasadda, 40% Muslimiinta ku nool France dareemay in la takooray. In ka badan seddex meelood oo ka mid ah dhacdooyinkan ayaa la duubay shantii sano ee la soo dhaafay, taas oo soo jeedinaysa kororka guud ahaan si xun ula dhaqanka Muslimiinta. France sanadihii ugu dambeeyay. Sahaminta ayaa lagu ogaaday in 60% haweenka xiran xijaabka ay la kulmaan takoor. 37% Muslimiinta ku nool France dhibbane u ahaa dhibaateyn afka ah ama cay cay. Daraasadda, ayaa shaaca ka qaadday in 44% haweenka muslimiinta ah ee aan xijaab xidhin ay isu arkeen inay yihiin dhibbane aflagaado aflagaado ah ama cay cay ah. Baadhitaanka ayaa lagu ogaaday in 13% dhacdooyinka takoorida diineed ay ka dhaceen goobaha kontoroolka booliska halka 17% ay ka dhaceen wareysiyada shaqada. 14% shilalka dhacay intii dhibbanayaasha ay raadinayeen inay kireystaan ​​ama ay iibsadaan hoy. IFOP waxay sheegtay in 24% dadka muslimiinta ah ay la kulmeen dagaal afka ah intii ay noolaayeen, halka 9% dadka aan muslimiinta ahayn ay la kulmeen Intaas waxaa sii dheer, 7% dadka muslimiinta ah waxaa lagu weeraray jir ahaan, marka loo eego 3% dadka aan muslimiinta ahayn.
Si kastaba ha noqotee, 2019, sida laga soo xigtay Wasaaradda Arimaha Gudaha ee Faransiiska, 154 falal diinta ka dhan ah ayaa lagu bartilmaameedsaday Muslimiinta (+ 54%), halka kuwa bartilmaameedsanayay Yuhuuddu ay istaageen 687 (+ 27%), kuwa ka soo horjeedana Masiixiyiintu waxay ahaayeen 1.052.
Qiyaasaha ku saleysan asalka juquraafiyeed ee dadka
Sida laga soo xigtay Dowladda Faransiiska, oo aan xaq u lahayn inay weydiiso su'aalo toos ah oo ku saabsan diinta una isticmaasho halbeegga asalka juquraafiyeed ee dadka aasaas u ah xisaabinta, waxaa ku noolaa 5 ilaa 6 milyan oo muslimiin ah magaalooyinka waaweyn France sanadkii 2010. Dowladdu waxay tirisay dhammaan dadkaas France kuwaas oo ka soo haajiray wadamo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah, ama waalidkood ay ka haajireen.
The United States Waaxda Arimaha Dibada waxay u dhigtey qiyaastii 10%, halka labo codbixin 2007 lagu qiyaasey ilaa 3% guud ahaan dadka.
Daraasad ay sameysay Pew Forum, oo la daabacay Janaayo 2011, waxaa lagu qiyaasey 4.7 milyan oo Muslimiin ah France sanadkii 2010 (oo saadaaliyay 6.9 milyan sanadka 2030).
Shirkadda codbixinta Faransiiska ee IFOP waxay ku qiyaastay 2016-ka in Muslimiinta Faransiiska ay u dhexeeyaan 3 ilaa 4 milyan, waxayna dhaleeceeyeen soo-jeedinta ku saabsan diimeed diimeed oo muhiim ah (Waxa loogu yeero Dib-u-Celinta weyn ee siyaasadda Faransiiska) IFOP waxay sheeganeysaa in ay yihiin 5.6% kuwa ka weyn 15, iyo 10% kuwa ka yar 25 sano. Iskutallaabta sanadkii 2011, iyadoo lagu saleynayo sahanno la isku daray, 75% dadka ka soo jeeda qoysaska “Asal ahaan Muslim” (sic) wuxuu sheegay inay ahaayeen Mu'miniin. Tani waxay ka badan tahay daraasaddi hore ee 2007 (71%) laakiin waxay ka yartahay tii 2001 ka hor (78%). Kala duwanaanshahan, oo ay sababtay muuqaalka sahaminta, wuxuu muujinayaa dhibaatada ay leedahay in si sax ah loo dhiso tirada rumaystayaasha. Sida lagu sheegay isla sahanka 155 ka mid ah dadkii la wareystay oo lahaa ugu yaraan hal waalid oo muslim ah 84.8% loo aqoonsaday inay yihiin Muslimiin, 3.4% loo aqoonsaday inay yihiin Masiixiyiin, 10.0% loo aqoonsaday inaysan diin aheyn 1.3% na ay leeyihiin diimo kale.
Ilaha wasaaradda arrimaha gudaha l'Islaam dans la République waxay daabacday qaybinta soo socota ee lagu qiyaasay muslimiinta ee Alain Boyer ee waddamada ku xiran 1999:
Afrikada Saxaraha hoose 250,000
Bariga Dhexe 100,000
hadhay Aasiya (badiyaa Pakistan iyo Bangladesh) 100,000
Soogalootiga sharci darrada ah ama sugitaanka sharciyeynta 350,000
Sannadkii 2008, boqolkiiba soddon iyo sagaal ka mid ah muslimiinta ay su'aalaha weydiiyeen IFOP ayaa sheegay in ay ilaalinayeen shanta salaadood ee Islaamka maalin kasta, taas oo ah kor u kac joogto ah oo ka yimid 31 boqolkiiba 1994, sida lagu sheegay daraasadda lagu daabacay joornaalka Katooliga ah ee La Croix.
Ka qeybgalka Masaajidka ee Salaada Jimcaha ayaa sare u kacay ilaa 23 boqolkiiba, sanadkii 2008 halka uu ka ahaa 16 boqolkiiba 1994, halka sanadkii 2008 gudashada Ramadaanka ay gaartay 70 boqolkiiba marka loo barbardhigo 60 boqolkiiba 1994, ayay tiri. Cabitaanka khamriga, oo Islaamku reebay, ayaa sidoo kale hoos u dhacay 34 boqolkiiba halkii boqolkiiba 39 ay ahayd 1994, sida lagu sheegay daraasad lagu sameeyay 537 qof oo asal ahaan Muslim ah.
Daraasad la sameeyay sanadkii 2015 ayaa lagu ogaaday in ilaa 12,000 oo Muslimiin Faransiis ah ay qaateen diinta Kirishtaanka, laakiin waxay xustay in tiradaasi laga yaabi karo, waxaana ku jiri kara oo kaliya dadka Protestant-ka ah.
Sida laga soo xigtay Michèle Tribalat [fr], cilmi baare ka tirsan INED, aqbalida 5 ilaa 6 milyan oo muslimiin ah France sanadkii 1999 aad baa loo qiimeeyay. Shaqadeedu waxay muujisay inay jiraan 3.7 milyan oo qof oo "iimaan muslimiin macquul ah" ku jira France Sannadkii 1999 (6.3% ee wadarta dadweynaha Metropolitan France). Sanadkii 2009, waxay ku qiyaastay tirada dadka iimaanka muslimiinta ku jira France wuxuu ahaa qiyaastii 4.5 milyan.
Sida laga soo xigtay Jean-Paul Gourévitch, waxaa jiray 8.5 milyan oo asal ahaan muslimiin ah (qiyaastii 1/8 tirada dadka ah), ee ku taal magaalo-weynta France in 2017.
Sanadkii 2017, François Héran, oo ahaa Madaxii hore ee Laanta Sahanka Dadweynaha ee INSEE iyo Agaasimaha INED (Machadka Faransiiska ee Cilmi-baarista Dadweynaha) intii u dhaxeysay 1999 iyo 2009, wuxuu sheegay in qiyaastii sideed meelood meel dadka Faransiiska ah ay asal ahaan ka soo jeedaan Muslimiinta 2017 (8.4 milyan ).
Sida laga soo xigtay Eurobarometer-kii gaarka ahaa ee ugu dambeeyay 493 (2019) dadweynaha muslimiinta ah France waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 5% ama 3.350.000 milyan.
Xarunta cilmi baarista ee Pew ayaa saadaalisay in dadka muslimiinta ah ay kor u kici doonaan 8.6 milyan ama 12.7 boqolkiiba dalka sanadka 2050.
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Faransiiska Xalaal